Ukubhala umxholo wokuzibandakanya oguqula ishishini | Martech Zone
Ukubhala uMxholo wokuzibandakanya oTshintshela kwiShishini
NgoLwesihlanu, Novemba 8, 2019 NgoLwesihlanu, Novemba 8, 2019 Douglas Karr
Ndihlala ndimangalisiwe xa ndifunda inqaku elimangalisayo kwindawo yeshishini lomntu okanye ibhlog, kodwa ke andinalo nofifi lokuba ngoobani, kutheni ndifuna ukusebenza nabo, bakhonza bani, okanye balindele ukuba ndenze ntoni ngokulandelayo Kwisiza. Njengoko utyala imali
Umxholo owenziwe kakuhle ufuna utyalomali olubalulekileyo kuphando, uyilo lwenqaku, imifanekiso, kunye nokukhuthaza. Ukuba ndihlala kwinqaku lakho elakha ukuthembana kunye negunya kunye nam ngesihloko endisenza uphando… uyandinceda ukuba ndiqonde ukuba ngawaphi amanyathelo alandelayo anokuzibandakanya nawe okanye inkampani yakho?
Inokuba sele uyibonile rant yam ividiyo kuthethathethwano, uyayazi ke indlela endivakalelwa ngayo malunga nokuba la magama aphoswa gingci. Anditsho ukuba lonke iqhekeza lomxholo olikhuphileyo kufuneka lilandeleleke ngqo kwiitriki zokuguqula, nangona oko kunokuba kuhle Kodwa… xa uzama ukukhokela umfundi ngophando lwakho unenjongo yeshishini engqondweni… ungalibali ukubandakanya izixhobo eziyimfuneko, ukukhangela, okanye ukubizela amanyathelo ukubanceda baqonde ukuba ngawaphi amanyathelo alandelayo bangathatha!
Isitshixo sokuvelisa umxholo kukwazi injongo yayo. Ukuba upapasha umxholo ukugcina ibhlog yakho ijongeka isebenza kwaye ugcina rhoqo, uyayiqonda ingongoma yako konke. Kuya kufuneka wenze umxholo ngenjongo yokufezekisa iinjongo ezithile ngexesha lenkqubo yophuhliso.
UJoseph Simborio, Spiralytics
Kule infographic evela kwi-Spiralytics, Umxholo oJolise kwiinjongo: Uyenza njani iMixholo yeeKhonkco, iiNgcali, okanye iiNguqu, zibonelela ngenkqubo elula yokuqinisekisa ukuba umxholo wakho unganikezela kutyalo-mali lwawo. Ukwahlulwa kweenjongo kulula kwaye kubuchule:
Umxholo wokuzibandakanya -Umxholo yiyo eqhuba abantu kwiwebhusayithi yakho. Kodwa ngemveliso yobuninzi bomxholo okwi-intanethi kunye notshintsho rhoqo kuGoogle kwi-algorithm, umgangatho womxholo kunye nexabiso liya kuhlala liyinto ephambili. Ukuba umxholo wakho ulungile, kufanelekile ukuba ubandakanyeke. Kwaye ukuba uyabandakanyeka, lindela ukugcwala kwetrafikhi.
Umxholo weeKhonkco Iinjini zokukhangela zisebenzisa amakhonkco njengophawu lokuthembela kwi-algorithm yabo kuba abantu bathanda ukunxibelelana ngakumbi nabasemagunyeni abathembekileyo kwi-intanethi, ekwanceda nefuthe kwizikhundla zokukhangela. Iindawo ezigunyazisiweyo ngokubanzi zinabaphulaphuli abaninzi kunye nokubonakala, okwenza kube lula ukufumana amakhonkco. Inyaniso, 21 ekhulwini Ubume beGoogle yealgorithm ixhomekeke kwiimpawu zonxibelelwano okanye inani lamakhonkco kwisizinda.
Umxholo wokuGuqulwa -Iinjongo zakho zokugqibela njengeshishini kukuguqula amathemba akho abe lutshintsho olunenzuzo, ke umxholo wakho kufuneka uhambise abaphulaphuli kwaye ubenze bathathe inyathelo. Oku kuya kuguqula iindwendwe zakho zibe zizikhokelo, zikhokelele kubathengi, kunye nabathengi babe ngabameli be brand.
Jonga i-infographic epheleleyo apha, kwaye uqiniseke ukuba ucofa kwaye ufunde inqaku likaJim ngokupheleleyo ukuze ufumane iinkcukacha ezintle!
tags: umnxeba kwizenzoUkuThengiswa kweMpahla
Ubuhle: Qhagamshela, Lawula, kwaye Uhlalutye idatha yakho yokuthengisa